Siza kanjani isifo sikashukela? -Izifo Zesifo Sikashukela-Sinocare
Sifika kanjani isifo sikashukela?
Isikhathi: 2019-08-23 Hits: 378
Kwamukelwa ngokuvamile ukuthi iningi lohlobo 2 sikashukela lubangelwa izindlela zokuphila ezingenampilo. Ngokuqondile, abantu badla kangcono futhi benza ukuvivinya umzimba okuncane. Ukuziphatha okunjalo kungadala izinkinga: ukudla ngokweqile kwama-calories akukwazi ukusha kepha kuqoqane emzimbeni, kuguqulwe kube yi-glucose, lapho kune-glucose eyengeziwe egazini, i-islet yomuntu izokhipha i-insulin ezenzakalelayo ukuze isetshenziselwe i-glucose.
Kepha, lapho lesi siqhingi sisebenza ngokweqile, abantu abazi, badla nokuvivinya umzimba okuncane, uma izinto ziqhubeka kanjena, lesi siqhingi sikhungathekile, asisakhiphi i-insulin eyengeziwe lapho ushukela wegazi wenyuka ngokwemvelo.
Isifo sikashukela senzeka lapho amazinga eglucose egazi enyukela endaweni ethile.
Sivezwa emiqondweni yezokwelapha, isifo sikashukela yisifo esingelapheki, isifo se-glucose metabolism esibangelwa ukungabikho kwe-insulin noma ukumelana ne-insulin, okuhambisana namafutha, amaprotheni, amanzi kanye ne-electrolyte metabolism metabolism ebonakala nge-hyperglycemia engapheli.
Ngesifo sikashukela, abantu bangavela njengezimpawu njenge- “polys ezintathu nokukodwa okuncane” ----- badle kakhulu, baphuze umchamo owengeziwe nokuncipha kwesisindo. Kepha abantu abaningi abanazo lezi zimpawu. Ngakho-ke, ungacabangi ukuthi "ube nesifiso sokudla" kungukuthi "isimo esihle somzimba".
Isithasiselo: izindlela zokuxilonga isifo sikashukela
Izinga le-venous Plasma glucose (mmol / L)
Izimpawu ezijwayelekile zesifo sikashukela (i-polydipsia, i-polyuria, ukudla ngokweqile, ukunciphisa umzimba) kanye nokungahleliwe
ukuhlolwa kweglucose yegazi
Ukuzila ukudla kweglucose
2 amahora postprandial glucose yegazi
Azikho izimpawu zesifo sikashukela, ezidinga ukuphindwa
Qaphela: ukuzila ushukela wegazi kubhekisa okungenani emahoreni ayi-8 ngaphandle kokudla; i-glucose yegazi engahleliwe isho ngaphandle kokubheka isikhathi sokudla kokugcina futhi ngenxa yalokho ngeke isetshenziselwe ukuxilonga ukukhubazeka kokuzila ukudla noma ukubekezelelana koshukela okhubazekile.
Ikhasi Langaphambili: Lapho izinga le ushukela wegazi lishesha kunokujwayelekile ...
Ikhasi elilandelayo: Kungani unesifo sikashukela?